FAMERENANA: Smart sy Twisty, 'The Axiom' - iHorror
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly FAMERENANA: Smart sy Twisty, 'The Axiom'
FAMERENANA: Smart sy Twisty, 'The Axiom'
by Timothy Rawles Oktobra 16, 2017
nosoratan'i Timothy Rawles Oktobra 16, 2017
Rehefa misy namana dimy manapa-kevitra ny hitoby hitady iray hafa, dia mahatsiravina amin'ny lafiny maro ny sarimihetsika amin'ny sarimihetsika vaovao The Axiom, ary iHorror no manana ny fijerinao voalohany.
Fantatrao fa ireo namana ireo dia amin'ny zavatra hafahafa rehefa miresaka ny sarimihetsika ny iray amin'ireo mpilalao Ny lalao mampidi-doza indrindra amin'ny hetsika voalohany.
Nanjavona ilay namana tsy hita atao hoe Marylyn rehefa avy nankany amin'ny toby nitoby antsoina hoe "Cinder Park". Izy koa dia rahavavin'ny roa amin'ny toby McKenzie (Hattie Smith) ary i Martin (Zac Titus) zokiny lahy.
Soso-kevitra manampy amin'ny toerana hahitana an'i Marylyn dia avy amin'ny loharano mampiahiahy, Craigslist, ary lehilahy iray antsoina hoe Leon izay nilaza fa fantany ny misy azy sy ny fomba hahitana azy.
Rehefa tonga tao amin'ny paositry ny tendrombohitra i Leon, dia tsikaritr'i McKenzie fa ny nanjavonan'ny rahavaviny dia mihoatra noho ny toa azy, saingy hafahafa loatra ny mino azy. Tsy maintsy mitsahatra izy manandrana ny fitakian'i Leon amin'ny fametrahana ireo namany sy rahalahiny amin'ny loza mety hitranga.
Niampy ilay fifangaroana dia ilay namana Edgar izay tsy salama saina izay vao avy nihatsara, ary nametraka azy sy izahay manontany tena hoe maninona no tsy milentika ny masoandro ao amin'ny Cinder Park.
Miaraka amin'ny fanondroana an'i The Matrix ary Silent Hill, Ny Axiom mametraka ny fototra iorenany amin'ny fivoaran'ny toetra ary mahagaga izany.
Mahavelom-bolo ny mahita horonantsary manangana ny toetrany avy ao anatiny fa tsy manipy archetypes efa tonta tsara amin'ny biby goavam-be, hetsika mihetsika mampidi-doza ataon'ny mpamokatra sarimihetsika io, soa ihany fa manana mpilalao mahay mamaky teny sy mahatakatra ny script izy ireo, mameno ny endri-tsoratra tsirairay avy isaky ny refy.
Ny talen'ny Nicholas Woods dia tsy milalao miaraka aminy ary tsy mameno izany amin'ny piraofilin'ny olona potboiler azo ampiasaina, fa mahatoky amin'ny olona tsara fanahy izay tena karakarainay izay mandray fanapahan-kevitra, tsy noho ny fanaovana sarintany an-tsarintany, fa satria tsy manan-tsafidy hafa izy ireo.
"Mihevitra aho fa tsy any amin'ny toerana heverintsika fa misy antsika", hoy ny toetra iray izay manome fiadan-tsaina ho an'ny mpijery satria toa izany koa no tsapan'izy ireo.
Lead Smith dia mandray ny tantaram-piainan'ny reins, vehivavy mahay mandanjalanja izy izay mamakivaky ny hadalan'i Cinder Park mitazona ny sainy sy ny tampony. Tsy ataon'i Smith ho naif be maso i McKenzie, fa ho tafavoaka velona kosa.
Ny vokatra manokana dia tsy ny zavatra mahasarika anao eto, misy ny fanomezam-boninahitra mahafinaritra zavatra iray avy ao amin'ny fivarotan'i Guillermo Del Toro ary fampisehoana fijanonana goavambe iray, fa ankoatr'izay, nahita ny sasany amin'ireto ghoul tarehy volo ireto izahay. taloha.
Tsara homarihina ihany koa fa ny sarimihetsika dia saika vita amin'ny vokatra azo ampiharina ka satroka ho an'ny andian-jiolahy.
Namboarina tam-pahakingana, nanao zavatra tsara ary tsy azo lavina fa mampieritreritra, Ny Axiom dia manaporofo fa ny horonantsary mampihoron-koditra dia tsy tokony hieritreritra ho mahomby na tsy misy dikany hampatahotra.
Miaraka amin'ny fihodinana izay mihodina amin'ny fotokevitra vaovao tanteraka amin'ny familiana farany (tadidio fa ny firesahana an-tsarimihetsika tany am-piandohana?), I Woods dia mahazo antoka fa tsy ho fintinina ny zava-drehetra amin'ny farany hamelana ny vavahady hisokatra ho an'ny toko hafa amin'ity tantara ratsy ity.
Ny Axiom dia vao manomboka ny eritreretintsika fa ho lasa franchise manaitra, farafaharatsiny manantena izahay.
Mahatalanjona Mega-Scale Miaraka amin'i Mezco Toyz
The Babysitter - Famerenana amin'ny sarimihetsika